Sagittarius nePiscesKuenderana muRudo, Hushamwari - Zodiac
maitiro ekuita ipad kubhadharisa nekukurumidza
isa ipad mini mune dfu modhi
sei wont iphone yangu rega nditarise nguva
iphone yangu ichachaja but wont turn on
yakagadziridza ipad yangu uye ikozvino haizoshanduke
Sagittarius nePisces: kuenderana kwezviratidzo muhukama hwerudo, mune hushamwari uye muwanano
Pisces murume sagittarius mukadzi. Sagittarius nePisces mubatanidzwa une gakava uye wakaomarara. Nezvavanofarira pamwe nezvinangwa zvakafanana zvehupenyu, vane dzinenge dzakapesana hunhu. Kuenderana kweSagittarius nePisces murudo, mhuri uye hushamwari zvinotsanangurwa zvakadzama muchinyorwa chedu.
Kuti unzwisise kuenderana kweaya mavara zvakadzama, zvakakodzera kuti uongorore hunhu hwese hweavo vatambi. Pazasi pane tsananguro yakadzama yehunhu hweSagittarius nePisces.
Sagittarius inoreva chinhu chemoto. Vazhinji vevanhu ava vanonakidza vafambi vanongogara vakakomberedzwa nechaunga cheshamwari. Ivo havagari vakanyarara, vanogara vachitsvaga sosi yezvinhu zvitsva, vanofarira kufamba, kuita mitambo, kusanganisira mitambo yakanyanyisa. Iine charisma yechisikigo, iyo Sagittarius ine tariro inosangana nevanhu nekukurumidza uye kazhinji inonakidzwa kubudirira nevakomana kana vasikana.
Sagittarius inoratidzirwa nepedyo yemwana, mutsara uye dzimwe nguva kusagadzikana. Ivo vanogona nekusaziva kubata mumwe munhu nekanganiso isiriyo. Asi kutsamwira Sagittarius kwenguva yakareba hazvigoneke, nekuziva kukanganisa kwake, achaita zvese zvinobvira kudzosa nzvimbo yemudiwa.
Panyaya dzemari, vapfuri semutemo vasina hanya. Ivo havafarire kuunganidza, vanoshandisa mari yakawanda pavaraidzo.
Sagittarius - inveterate kudanana. Vanowira murudo zviri nyore uye nekukurumidza, asi vanononoka zvishoma kana mumwe wavo atanga kutaura nezvemhuri. Vamiriri veBrand vanowanzo kutya mutoro, saka vanoroora uye vane vana pazera rakakura.
Inoshanda uye inonakidza, Sagittarius anokurumidza kuneta neyakajairwa, saka ivo vanoedza kusarudza iro rinonakidza basa ravo vega. Vamiririri vechiratidzo ichi vanowanzo kuve voruzhinji kana vatambi. Ivo havasi vasina hanya nekuita bhizinesi. Vaimbi vakanaka kwazvo, vatambi nevatambi vanowanzobva kuStreltsov.
Pisces iri pakati pezvinhu zveMvura. Vamiririri veichi chiratidzo - varwi kururamisira, kudzikama, vanhu vakangwara uye vanonzwira tsitsi. Ivo vanowana zviri nyore nzira yekubuda mumamiriro akaoma ehupenyu, kwete ivo chete, asiwo kune avo vakavakomberedza. Mapisisi anowanzo kubatwa nekukanganisa kweumwe munhu, anogona kuchinja chinzvimbo chavo kakawanda pachinhu chimwe chete.
Vamiririri vechiratidzo ichi vanoparara, vanoenda zviri nyore kunyange nevakuru shamwari, kana vachipindira mukuzadzisa zvinangwa. Hove inyanzvi dzepfungwa. Dzimwe nguva vanoedza kugutsa vanhu nezvepfungwa isiri iyo nezvehutera hwavo, kuti vagone kunyengerwa gare gare, vachivaita vabatsiri vavo kana vanovabatsira.
hove ine gakava. Kutsungirira kwechisikigo, kutsunga, kugona kuchinjika kune inochinja mamiriro anotendera Pisces kuzadzisa zvirinani zvinangwa zvavo. Nekudaro, husimbe hwavo hwekuzvarwa, kusagadzikana, kutya kuve nebasa, kushayikwa kwechirango uye chishuwo chekuenderera pamusoro pehunhu hwavo vanogona kutamba joko rine hutsinye navo. Penguva pasina kuedza nezvibodzwa zvakakwirira, Pisces inowanzoedza kutiza chokwadi nerubatsiro rwe doro.
Mafungiro ekutsigira mari muPisces anogona kunge akasiyana. Pakati pavo pane vapfumi uye varombo zvachose vanhu. Vamwe vamiririri vechiratidzo vane mari uye vanokwanisa kusevha mari, nepo vamwe vanoteera mamwe maitiro ehumwe kuenzana vanonyima hunhu hwezvinhu.
Mukudanana kwerudo, Pisces yakazvipira chose kune yakasarudzwa. Vamiriri vechiratidzo ichi, kunyangwe paine kungoita, hunhu hunodakadza. Ivo vanorangarira rudo rwavo rwekutanga hupenyu hwavo hwese uye zvinorwadza kupona pamabhureki.
Iyo tsika yekudaidzira uye kuda kwekureruka zvakapusa kunogona kusundira mumiriri wechiratidzo ichi panzvimbo inotsvedza. Maitiro echisikigo uye tsitsi, zvisinei, zvinogadzira Pisces vanachiremba vakanaka uye vanozvipira. Ivo vane hunyanzvi hwekugadzira hunyanzvi uye vanowanzo kuve mune hunyanzvi.
Kugarisana kwemurume Sagittarius uye mukadzi Pisces
Murume Sagittarius haana kutora kutarisa kwevakadzi. Iye anowanzo kutsvaga shamwari iyo inomukurudzira iye kukwidziridzwa kwakanaka uye uyo anoda kuchengeta nzvimbo yemoto pamba. Vakadzi Kubata havawanzo kuita sarudzo pavanosarudza mudiwa. Vanowanzo siya varume vakadzikama vachitsvaga zvirinani. Vasikana kubva pachiratidzo ichi vakaberekerwa kuda uye kudiwa.
Mune mamwe mamiriro ezvinhu, Pisces neSagittarius vanogona kuumba mubatanidzwa wakabudirira.
Ivo vaviri musikana wePisces uye murume weSagittarius vane hunhu hunhu vanotsvaga rwepamusoro uye rwakachena rudo. Muhupenyu vanogona kutsvaga kwavo kwakanakira kwenguva yakareba, vanosangana mumwe kwenguva yakati rebei vachitarisana uye vodzidza hunhu hwemudiwa mune akasiyana mamiriro.
Mushure mekuona mumwe wake wemweya mune yechirume Sagittarius, mukadzi wePisces anowedzera kuvhurika kune mumwe wake uye otanga kumuchengeta. Uye iyewo, anoedza kufadza mudiwa munzira dzose uye dzimwe nguva anorega iye kutungamira. Zvichipa rudo rwezviratidzo zvese izvi, hukama hwakadai hunobudirira chete mune kusagadzikana kwekuvimbana.
Muchato wemukadzi wePisces nevarume veSagittarius ungangove wakasiyana zvakanyanya kubva kune zvakajairika mhuri. Iko hakuna akajairwa mabasa. Hazviite kuti mukadzi wePisces abvume kuzviita mukicheni uye ape hupenyu hwake kuvana, uye Sagittarius isina basa uye isina basa haizove murume akavimbika. Kuonga mumwe nemumwe ivo chichava chimwe chinhu.
Kuna Sagittarius, kugona kwake kugadzirisa matambudziko ezuva nezuva, rutsigiro uye nyaradzo panguva yakakodzera kuwanda kukuru kumukadzi wake. Mukadzi anoyemura chiitiko chemurume wake uye kunakidzwa kwake. Ivo vachada kufamba pamwe chete uye yavo nzira yehupenyu ichave yakagadzikana kuderera. Kupotsa mumwe nemumwe, ivo havazopa. Zvakare, zvido zvinozivikanwa uye hunhu hwakaenzana hwehupenyu zvichawedzera kusimbisa kubatana kwavo.
Hushamwari hwakajeka uye hwakasimba pakati pemurume Sagittarius nevakadzi Pisces huchave hwakasimba. Vanoda kugovana zviono zveumwe neumwe pamusoro pefirimu nemumhanzi. Vachafamba vachifara pamwechete, kuyedza chimwe chinhu chitsva. Ivo kashoma kuti vabatsirane nemazano anoshanda, asi vanozogona kutaura zvizere nezvenyaya imwe neimwe. Kazhinji kazhinji hushamwari hwakadaro hwunoyerera zvakatsetseka kupinda munganonyorwa.
Sagittarius mukadzi uye Pisces murume kuenderana
Anoshamisa, murume anorota Pisces uye musikana anoshingaira Sagittarius zvakaoma kuwana kunzwisisa muhukama. Iwo mwero wekuenderana zvinoenderana nerudzi rwehukama uye chishuwo chevadikani kuti vashande vega.
Sagittarius, hove dzevakadzi uye dzechirume dzakafanana mumaonero avo ehupenyu. Vose vari vaviri vanonyudzwa mune kwavo kufunga uye zviroto. Asi kana murume akadzikama wePisces akajaira kuenda nekuyerera, mukadzi weSagittarius haagare akapeta maoko. Inoshanda uye ine simba, haina simba uye iri kuwedzera, saka kubatana kwakadai hakuwanzoitika. Mukadzi weSagittarius acharamba achifanira kugutsa murume wePisces weimwe chiito, icho mumaonero ake chichamubatsira. Ichashungurudza musikana, iye achaneta uye kuputsa hukama.
Kuenderana kwemapoka enyeredzi muhupenyu hwemhuri zvakaderera. Kuroora Kuredza varume nevakadzi Sagittarius kuchanetsa kune yekupedzisira. Vasikana kubva pachiratidzo ichi vanowanzo sarudza murume akavimbika semurume anozove mutsigiro, zvinosuwisa kuti hazvigone kutaurwa nezvePisces.
Iye murume wePisces haadi kutevedzera yakajairwa pfungwa yemurume wake, zvakaoma kumunakidza, izvo zvinozogumbura mukadzi weSagittarius. Musikana mumwe chete ariwo kure nemufananidzo wemukadzi akanaka. Anowanzo asipo pamba uye dzimwe nguva haaite mabasa epamba. Muchato wakadai unozobudirira kana mukadzi weSagittarius akatora chinzvimbo chekuriritira uye basa remurume rakagadzira.
Mukushamwaridzana, Vissenman nemukadzi Sagittarius havasi sevanoda kune mumwe nemumwe sekuroora kana kudanana. Zvichava zvinonakidza kuti vataure pamusoro pezvinhu zvese kwenguva yakareba, havazokwanise kuneta. Ndiye nyanzvi yepfungwa dzinozomupa rubatsiro mutsika nemamiriro ezvinhu akaoma, iye munhu anogona kupindura zvakanaka nekupa tariro. Hushamwari hwavo huchave hunofadza uye hwakareba.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti kusangana kweSagittarius nePisces hakuwanzoitika, kune zvimwe zvakanaka.
Izvi zvinosanganisira zvinotevera mapoinzi:
sezvo vamiririri vezviratidzo zvese vari kushingairira zvinangwa zvepamusoro zvemweya, vanozokwanisa kudzidzisa vana vavo zvakakwana, vachivapa kugona kunzwira tsitsi uye kuda kururamisira;
Kana zvichidikanwa, Sagittarius nePisces vanogona kuwana nyore kuwirirana muhukama nekuti vanogona kuchinjika kune mamwe mamiriro;
mune vaviri vaviri Mukadzi hove uye murume Sagittarius kazhinji murume akangwara uye akangwarira uyo anodzidzisa murume wake anotambisa kuchengetedza mari;
zvisingaite nemasikirwo, Sagittarius dzimwe nguva anongoda zororo rekuzvarwa rePisces, rinovabatsira kuzorora, kutsauka kubva kubhinyu rezuva nezuva uye kufunga nezvavanoita;
Kazhinji kazhinji Sagittarius nePisces vanove vakaroorana vakanaka kune mumwe nemumwe pamubhedha, nekuti vese rudo miedzo uye vanovavarira kune chimwe chinhu chisina kujairika.
Kukanganisa kwesangano rerudo kana muchato weSagittarius nePisces zvinotevera:
Ihove dzinowanzo shatisa zvakawandisa (mumaonero avo) Sagittarius chiitiko nekuti chinovamanikidza kuti vaite uye vafunge nezvekumanikidza matambudziko mushure mekunge vasiya nyika yezviroto zvavo;
Sagittarius anoshungurudza kusangoita kweumwe wake, husimbe hwake, kusada kuzadzisa zvinangwa zvake muchokwadi;
Sagittarius mukadzi, achisiya zvido zvavo kumashure nekuda kwemurume wake, uye murume wePisces, uyo akakundwa nemukadzi wake ndokutanga kuoneka, anogona kusafara zvakanyanya muwanano;
mukadzi anotambura wePisces anogona kusuwa nehunyanzvi hunowanikwa muSagittarius;
mukadzi akazvarwa pasi pechiratidzo chePisces akazvipira chose kurudo, saka anogona kukuvadzwa nekureruka kwemoyo weSagittarius, uyo ane zvimwe zvakawanda zvinodiwa kunze kwekunzwa kune mumwe wake.
Kuenderana kweiyo horoscope yakaratidzwa ine ruzivo rwehuwandu nezvehunhu hwePisces neSagittarius. Kubudirira kwemubatanidzwa kwezviratidzo izvi kunoenderana nehunhu hwemunhu uye kugona kwemativi ese kuita mvumo.
20 Hunhu hweSagittarius zodiac chiratidzo